Service Technician Archives - Glory Assumption Space
Service Technicians( ပြည်ရုံး ) - Male (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Service Technicians( ပြည်ရုံး ) - Male (5) Posts/ လစာ - ၂၅၀,၀၀၀ ကျပ် /စမ်းချောင်းမြို့ နယ်။ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ AGTI ,BEဘွဲ့ ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။ Computer Basic ကျွမ်းကျင်သူဖြစ် ရမည်။Touch သီးသန့်,LCD သီးသန့် လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ Speaker လဲခြင်း၊ Camera လဲခြင်း၊ Body Frame လဲလှယ်ခြင်း၊ Junior technicians တို့မှ ဖြေရှင်းပြီးသော အလုံးများအား ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ error ကင်းစင်ကြောင်းထပ်မံ approve ပြုလုပ်ပေး ရမည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်သော တာဝန်များ ကို Supervisor, Executive, Technicians Manager များသို့ Report ပေးနိုင်ရမည်။ ရုံးစည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်း အတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ အသက် ( ၂၀ ) နှင့် ( ၃၀ ) အတွင်းဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်လျှင် အချိန်ပိုဆင်းနိုင် သူဖြစ်ရမည်။ ရုံးစည်းကမ်းလိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ နယ်ရုံးခွဲတွင် တာဝန်ထမ်းဆောင်နိုင် သူဖြစ်ရမည်။ UnderPressure အောက်တွင်လုပ် ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။
Service Technical – Males (5) Posts
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Electronic Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။တစ်ပတ်အတွင်း အင်တာဗျူးဝင်ရမည်။
Service Technical – Males (5) Posts/ လစာ - ၃၀၀,၀၀၀ ကျပ်ညှိနှိုင်း/ ဗဟန်းမြို့ နယ်။
- A.G.T.I ကျောင်းပြီးသူ (သို့ ) တက္ကသိုလ်တခုခုမှဘွဲ့ ရရှိသူဖြစ်ရမည်။ - ထမင်းပေါင်းအိုး/ရေခဲသေတ္တာ/ပန်ကာ/အဝတ်လျှော်စက်များကို Service လုပ်ဖူးသူဖြစ်ရမည်။ - လုပ်ငန်းအတွေ့ အကြုံ (၂)နှစ်ရှိရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်။ Viber ဖြင့် CV ပို့မည်ဆိုပါက ဓာတ်ပုံသေချာ ကြည်လင်ပြတ်သားစွာရိုက်၍ ပေးပို့ပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည် ။ E-mail- gasrecruit.hr1@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com, gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com Phone Number –09- 262223785 , 09 977397705, 09 263121101, 09262223784 Viber Phone Number –09262223783, 09262223784, 09263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – ခြံအမှတ် ( ၁၉ / ၁၃၀ ) ၊ ရတနာပုံကျောင်းလမ်း ၊ ၉ မိုင် ၊ မရမ်းကုန်း မြို့နယ် ။ ( ပြည်လမ်း ၊ ၉ မိုင် မှတ်တိုင်တွင် ဆင်းရန် ။ Ocean North Point နှင့် နီးပါသည်။ )
Service Technician -M (5) Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ်
###### URGENT REQUIREMENT ###### မင်္ဂလာပါရှင့်။GAS နှင့်ချိတ်ဆက်ထားသော Distribution Company တွင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ရန် အောက်ပါဝန်ထမ်း အမြန်အလို ရှိသည်။ Service Technician -M (5) Posts /လစာ- ၂၅၀,၀၀၀/- ကျပ် / စမ်းချောင်းမြို့နယ်။ ဘွဲ့ရဖြစ်ရမည်။ AGTI ,BEဘွဲ့ ရရှိထားသူဦးစားပေးမည်။Computer Basic ကျွမ်းကျင်သူဖြစ် ရမည်။Touch သီးသန့်,LCD သီးသန့် လဲလှယ်ပေးခြင်း၊ Speaker လဲခြင်း၊ Camera လဲခြင်း၊ Body Frame လဲလှယ်ခြင်း၊ Junior technicians တို့မှ ဖြေရှင်းပြီးသော အလုံးများအား ပြန်လည်စစ်ဆေး၍ error ကင်းစင်ကြောင်း ထပ်မံ approve ပြုလုပ်ပေးရမည်။ လုပ်ငန်းနှင့် ပက်သက်သော တာဝန်များကို Supervisor, Executive, Technicians Manager များသို့ Report ပေးနိုင်ရမည်။ ရုံးစည်းကမ်း လိုက်နာနိုင်သူ ဖြစ်ရမည်။ လုပ်ငန်းအတွေ့အကြုံ အနည်းဆုံး ( ၅ ) နှစ်နှင့်အထက်ရှိရမည်။ အသက် ( ၂၀ ) နှင့် ( ၃၀ ) အတွင်းဖြစ်ရမည်။ လိုအပ်လျှင် အချိန်ပို ဆင်းနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ ရုံးစည်းကမ်း လိုက်နာနိုင်သူဖြစ်ရမည်။ UnderPressure အောက်တွင်လုပ် ကိုင်နိုင်သူဖြစ်ရမည်။ မှတ်ချက် ။ ။ CV Form များတွင် Passport ဓာတ်ပုံ တစ်ပါတည်းထည့်သွင်းပေးပါရန် မေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်။ Email ဖြင့်လည်းကောင်း၊ Viber ဖြင့်လည်းကောင်း ၊လူကိုယ်တိုင်လည်းကောင်း လာရောက်လျှောက်ထားနိုင်ပါသည်၊ E-mail- gasrecruit.hr7@gmail.com, gasrecruit.cv@gmail.com, gasrecruit.hr2@gmail.com Phone No.- 09-262223785 , 09 977397705, 09 263121101 ရုံးခန်းလိပ်စာ – Myanmar Professional Training Center @ MPTC ခိုင်ရွှေဝါလမ်း ၊ အမှတ် (၂၉) ပထမထပ် လှည်းတန်း ကမာရွတ်မြို့နယ်။
Service Technician (Air Con/TV/Camera,CCTV)-Male (5) Posts
Salary Rang : 280000
4. Service Technician (Air Con. /TV / Camera, CCTV) - Male (5) Posts/Salary- 280,000 Kyats (Negotiable)/Bahan Township - BE, B.Tech (EC or EP) - Age 20 and Above - Minimum of (1) year experience in related field - Fluent in English (4) skills - Good Communication & Interpersonal Skills